16,273,346 unique visits
Read More · 0 Comments · 4110 Reads
Read More · 0 Comments · 336 Reads
Read More · 0 Comments · 238 Reads
Read More · 0 Comments · 818 Reads
Read More · 0 Comments · 1682 Reads
· Wararkii ugu dambeeyay xaalada Magaalada Kismaayo iyo xaalada nololeyd ee Col. Yaasiin Raadeer
Wararka ka imaanaaya Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxay sheegayaan inay xaalada kacsan ka jirto Magaalada Kismaayo.
Galkacal on June 18 2013 20:47:36 ·
Read More · 0 Comments · 3018 Reads
· Laba kamid ah baalayaasha cad-ceeda ku shaqeeya oo galabta lagu qarxiyay Magaalada Muqdisho
Laba qaraxyo oo loo adeegsaday miinooyinka nooca dhulka lagu aaso, ayaa waxaa gelinkii dambe ee galabta loo adeegsaday burburinta laba kamid ah, baalooyinka qoraxda ku shaqeeya ee Magaalada Muqdisho.
Galkacal on June 18 2013 19:28:06 ·
Read More · 0 Comments · 2175 Reads
· Afhayeenka Ciidamada Kenya oo ka hadlay qaraxii maanta Ciidamadooda lagula eegtay Magaalada Kismaayo
Qaraxaan ayaa waxaa maanta Ciidamada Militariga ee Dowladda Kenya lagula eegtay Xaafadda Via Afmadow ee Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Galkacal on June 18 2013 16:52:41 ·
Read More · 0 Comments · 1674 Reads
· Shabaab oo gurmad xoog leh soo geliyay Buurdhuubo & Ciidamada Huwanta oo soo baneeyay Deegaanka Faanweyn
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo xoog leh ayaa waxay weli ka sii soconayaan wadada xiriirisa Degmooyinka Garbahaarey iyo Baardheere ee Gobolka Gedo, waxaana markasta la filan karaa dagaalo ka qarxa Gobolka.
Shiil on June 18 2013 15:02:43 ·
Read More · 0 Comments · 2119 Reads
· Ciidamada Dowladda Afghanistan oo maanta Ciidamada Nato kala wareegay hawlihii ay dalkaasi u joogeen
Ciidamada Dowladda Afghanistan ayaa waxay maanta si rasmi ah ay Ciidamada Midowga Nato, ay ugala wareegeen hawlihii shaqo ee ay u jooggeen dalkaasi.
Shiil on June 18 2013 14:21:50 ·
Read More · 0 Comments · 888 Reads
· Ciidamada Dowladda oo gacanta ku dhigay nin si bareer ah u dilay xaaskiisa
Xasan Isaaq Abgaalow ayaa waxaa suura gashay inay gacanta ku dhigaan Ciidamada Booliska ee Dowladda, ka gadaal markii uu Axadii xaaskiisa uu ku dilay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Shiil on June 18 2013 13:11:37 ·
Read More · 0 Comments · 1293 Reads
· Col. Yaasiin Raadeer oo maanta lagu dhaawacay Magaalada Kismaayo & dhaawaciisa oo Nairobi loo duulinaayo
Col. Yaasiin Nuur Gaas �Yaasiin Raadeer� ayaa waxaa maanta lagu dhaawacay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose, iyadoo diyaarad looga dalbay Magaalada Nairobi, si dhaawaciisa loogu qaado.
New York on June 18 2013 12:30:34 ·
Read More · 0 Comments · 3253 Reads
· Shirweynaha waxbarasho ee dalka oo ka furmay Muqdisho iyo Dr. Saacid oo daah furay "Daawo Sawirada"
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho ka furmay Shirweynaha Qaran ee waxbarashada dalka looga arinsanaayo, muddo 22 sano kadib, oo uu dalku ku soo jiray xaalado murugsan.
New York on June 18 2013 11:43:52 ·
Read More · 0 Comments · 1580 Reads
· DEG DEG: Ciidamada Kenya oo qarax miino lagula eegtay Magaalada Kismaayo
Qaraxaan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay la socdeen Ciidamada Militariga ee Kenya, ee qeybta ka ah hawlgalka Midowga Afrika ee Amisom.
New York on June 18 2013 09:38:27 ·
Read More · 0 Comments · 2133 Reads
· Taliyaha ciidanka Amisom ee G/hiiraan oo sheegay inay iminka utafaxeedanayaan sidii Shabaab Gobalkaasi uga saari lahaayen Saraakiisha ciidanka Amisom ee Gobalka Hiiraan ayaa sheegay in iminka la gaaray waqtigii Shabaab guud ahaan Gobalka Hiiraan laga saari lahaa deeganada ay ka joogaan.
Rashka on June 18 2013 08:55:51 ·
Read More · 0 Comments · 547 Reads
· Al-Shabaab oo weerar dagaal ku qaaday Degmada Ceelbarde,xilli ciidanka Ethiopia iyo kuwa Dowladda dagaal isku diyaarinayeen
Wararka ka imaanaya Degmada ceelbarde ee Gobalka Bakool ayaa sheegaya in xoogaga Shabaab xalay halkaasi ay ku qaadeen dagaal xoogan.
Rashka on June 18 2013 08:40:38 ·
Read More · 0 Comments · 1312 Reads
· Salaad Cali Jeele oo Dowlada Soomaaliya eedeen ujeediyay
Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka gaabisay sugidda dhanka ammaanka Magaalada Muqdisho,xilli habeen kahor xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya madaafiic lagu garaacay.
Rashka on June 18 2013 08:27:35 ·
Read More · 0 Comments · 1503 Reads
· Xoogaga Shabaab oo soo bandhigay askar ka tirsan Dowladda "Daawo Sawirada"
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa deegaan ka tirsan Gobalka Shabeelaha hoose.
Rashka on June 18 2013 08:18:39 ·
Read More · 0 Comments · 2460 Reads
· Dowladda oo lagu eedeeyay in Kismaayo ay ka hurinayso colaad
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Dowladda Soomaaliya wuxuu ku eedeeyay inay dagaal ka hurinayso Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose.
Rashka on June 18 2013 07:51:21 ·
Read More · 0 Comments · 1164 Reads
· Page 1 of 788: 1234...788